Abazali babongele izingane zabo kothisha baka-grade 12 – SIVUBELAINTUTHUKO
ABAZALI babafundi abebefunda u-grade 12 ngonyaka odlule eGeorgetown High School e-Edendale eMgungundlovu batheleke ngobuningi babo emagcekeni esikole bezobonga othisha ngokukhweza kwelenyoni izingane zabo njengoba lesi sikole sithole u-100% wemiphumela ka-grade 12.
Laba bazali batheleke becula izingoma zokutusa bephethe nezingqwembe obungathi uma ukude ubone sengathi bayabhikisha kanti lutho kulezingqwembe kubhalwe amagama okutusa nokubonga.
Ekhuluma egameni labazali uMnu Mncedisi Ndlela owusihlalo wesigungu esilawula lesi sikole uthe lokhu okwenziwe ngabazali kuhle futhi kuyabakhuthaza othisha ngomsebenzi wabo onzima wokuhlahla indlela yekusasa labafundi. Uthe othisha bebengazelele ukubona abazali betheleka ngaloluhlobo esikoleni. “Kuyasikhuthaza nathi siyisigungu ukubona abazali esibamele bebonga kothisha ababafundisela izingane zabo bezobabonga ngezinhliziyo ezivulekile. Sibonga uthando esilubone kubazali babafundi abebefunda u-grade 12 nyakenye bezokhuthaza othisha ngomsebenzi abawenzayo. Lokhu esikubonile kusihlabe umxhwele futhi siyafisa ukuqinisa ubudlelwano bethu obuhle phakathi kothisha nabazali. Sibonga nabo abafundi abasebenze ngokuzikhandla okugcine kuphuma lemiphumela emihle esiyitholile,” usho kanje.UMnu Ndlela ucele abafundi abenza u-grade 12 nonyaka ukubonela kwabaphambili nabo bahambe ezinyathelweni zabo. Uthe isikole sabo sidume ngemiphumela emihle ku-grade 12 ngakho kabazimsele ukugudluka kulomgudu abahamba ngawo ngoba ubonakala uwumgqigqo omuhle okumele kungabe kusagudlukwa kuwona. Uthe lokhu akubone kwenziwa ngabazali babafundi ufisa kukhule lingalitshalwa iqhaza labantu ababafundisela izingane zabo ngoba kuyabonakala ukuzinikela kwabo ekupheleni konyaka